သခင်ကိုယ်တော်မှိုင်း၏ ပြည်တွင်း ငြိမ်းချမ်းရေးဆန္ဒ ယနေ့အထိ မပြည့်ဝခြင်းကို စိတ်မကောင်းဖြစ်? - Yangon Media Group
သခင်ကိုယ်တော်မှိုင်း၏ ပြည်တွင်း ငြိမ်းချမ်းရေးဆန္ဒ ယနေ့အထိ မပြည့်ဝခြင်းကို စိတ်မကောင်းဖြစ်?
ဆရာကြီး သခင်ကိုယ်တော်မှိုင်း တစိုက်မတ်မတ် အားထုတ်ခဲ့သော်လည်း ယ နေ့အချိန်ထိ ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်း ရေး မရရှိသေးခြင်းမှာ များစွာဝမ်းနည်းစရာကောင်းကြောင်း ရွှေဝါ ရောင်တော်လှန်ရေးမှ ဆရာတော် ဦးစန္ဒာသီရိကမိန့်သည်။ ဆရာကြီး သခင်ကိုယ်တော် မှိုင်း (၁၄၂)နှစ်မြောက် မွေးနေ့အခမ်းအနားကို မတ် ၂၃ ရက်တွင် ရွှေတိဂုံဘုရားလမ်းရှိ ဦးဥတ္တမပန်းခြံ၌ပြုလုပ်ခဲ့ရာ ယင်းအခမ်းအနား၌ ဆရာတော်ဦးစန္ဒာသီရိက အမှတ်တရ စကားပြောကြားစဉ် အထက်ပါအတိုင်း ထည့်သွင်း မိန့်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
”ဘုန်းကြီးတို့အနေနဲ့ ဆရာကြီး မျှော်မှန်းခဲ့တဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး ပန်းတိုင်ကို မရောက်ရှိသေးတာ ကြောင့် စိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ်”ဟု ဆရာတော်က မိန့်သည်။ ဆရာကြီးသခင်ကိုယ်တော်မှိုင်းသည် တိုင်းပြည် ငြိမ်းချမ်းရေးရအောင် စွမ်းစွမ်းတမံဆောင်ရွက်ခဲ့သော်လည်း ယနေ့တိုင်ပြည်တွင်း စစ်ဖြစ်နေဆဲ၊ စစ်ဘေးဒုက္ခသည် တိုးနေဆဲဖြစ်ကြောင်း ¤င်းက ဆက် လက်မိန့်သည်။ လူ့ဘောင်သစ်ဒီမိုကရက်တစ် ပါတီဥက္ကဋ္ဌ ဦးအောင်မိုးဇော်က ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ဒီမိုကရေစီရရှိရေးအတွက် အခြေခံဥပဒေကို ပြင်ဆင် ရန်လိုကြောင်း ယင်းအခမ်းအနား ၌ အမှတ်တရ စကားပြောစဉ် ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့သည်။
”အခု ကျွန်တော်တို့ နှစ်နှစ်ရှိသွားပြီ။ ကျွန်တော်တို့ အစိုးရအာဏာရတာ နှစ်နှစ်ရှိသွားပြီ။ အဲဒီအခြေအနေအောက်မှာ ကျွန် တော်တို့ အလုပ်တွေ အများကြီးလုပ်သွားလို့ရမယ်လို့ မျှော်လင့်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဒီမိုကရေစီအဝန်းအဝိုင်းက ပိုပိုကျဉ်းလာသလို ဖြစ်နေပါတယ်။ ပြောမယ့်ဆိုမယ့်ကိစ္စတွေ၊ လုပ်မယ့်ကိုင် မယ့်ကိစ္စတွေကို အကုန်လုံး ချိန်ဆ နေရတယ်။ မနေ့တစ်နေ့ကပဲ လွတ်လပ်စွာ ဟောပြောခွင့်၊ လွတ်လပ်စွာဖော်ထုတ်ခွင့်ဆိုတာတွေကို ပိတ် ပင်နေတယ်။ အဲဒါ ကျွန်တော်တို့ အစိုးရက ပိတ်ပင်နေတာတွေ ဆို တော့ ဒါတွေက ဘယ်လိုတွေးရ မှန်းတောင် မသိတော့ပါဘူး”ဟု ၎င်းက ပြောသည်။
ယင်းအခမ်းအနားသို့ ဆရာကြီး သခင်ကိုယ်တော်မှိုင်း ငြိမ်းချမ်း ရေးကွန်ရက်(မုံရွာ)၊ ၇၄/၇၅ သပိတ်မှောက် အကျဉ်းကျ အလုပ်သမားဟောင်းကြီးများ ကွန်ရက်၊ လူ့ဘောင်သစ် ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ(ဌာနချုပ်)နှင့် ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသားသမဂ္ဂများ အဖွဲ့ချုပ်(ဗကသ)တို့မှ ဂုဏ်ပြုသဝဏ်လွှာများ ပေးပို့ခဲ့ကြပြီး ငြိမ်းချမ်းရေး ကဗျာများရွတ်ဆိုခဲ့သည်။
ရန်ကုန်မြို့တွင်း မြို့နယ်များ သောက်သုံးရေ ဖူလုံရေး ကုက္ကိုလ်ဝ မြစ်ရေတင် စီမံကိန်းကို ဆောင??
ရှေးဟောင်း အဆောက်အအုံနှစ်လုံး ဖြိုဖျက်မှုရှိခဲ့သည့် မြရိပ်ညို ဟိုတယ်ဟောင်း မြေနေရာ Yangon New World စ?